नेपाली कलाकार कस्तो कारमा हिँड्छन् ? - Sutra TV - Digital News Portal Sutra TV
नेपाली कलाकार कस्तो कारमा हिँड्छन् ?
काठमाडौं – नेपाली सिनेमाले विस्तारै सफल कारोकार गर्न थालेपछि फिल्म निर्माताहरुले लगानी बढाउन थालेका छन् । यसरी लगानी बढ्न थाले सँगै कलाकारहरुले लिने पारिश्रमिक पनि आकाशिँदै गएको छ ।
कलाकारहरुले पारिश्रमिक बढी पाउन थाले पछि उनीहरुको जिवनशैलीमा निकै परिवर्तन हुँदै गएको छ । पछिल्लो समय नेपाली कलाकारहरु कारमा गुड्ने गरेका छन् । कलाकारहरुको आम्दानीको स्रोत सिनेमा, म्युजिक भिडियो, स्टेज प्रोग्राम र विज्ञापन रहेको छ ।
पछिल्लो पुुस्तामा सबैभन्दा महंगो कार चढ्ने अभिनेतामा पर्छन् आयुष्मान देशराज जोशी । उनलाई उनको पुख्र्याैली सम्पत्तिले कार चढ्न सहज बनाएको देखिन्छ । त्यसैले त केही सिनेमाहरुमा मात्रै काम गरेका उनी दुईवटै महंगा कारहरु चढ्छन् । मर्सि्डिजको बजार मूल्य १ करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ भने उनको दोस्रो कार किया ८० लाखभन्दा महँगो छ ।
‘छक्का पञ्जा २’ को सफलतापछि कलाकार दीपकराज गिरीले नयाँ कार किनेका छन् । यसअघि उनले हास्यकलाकारको रुपमा स्थापित हुँदा ३१ लाखको स्वीफ्ट डिजायर चढ्ने गरेका थिए । तर ‘छक्का पञ्जा २’ को सफलतापछि उनले विशेष सेवा र सुविधासहितको टाटाको हेक्जा कार किने । यसको बजार मूल्य झण्डै ८० लाख पर्न आउँछ । यससँगै दीपकराज गिरी महंगो गाडी चढ्ने सेलिब्रेटीको सूचीमा पनि परेका छन् ।
पछिल्लो समय निकै राम्रो नाम कमाएका नायक हुन, आकाश श्रेष्ठ । सुस्मिता केसीले निर्माण गरेको चलचित्र ‘म त तिम्रै हुँ’ बाट डेब्यु गरेका श्रेष्ठ अभिनित चलचित्रहरुमा ‘तिमीसँग’, ‘ड्रिम गर्ल’, ‘ब्ल्याक’, ‘रामकहानी’ आदि रहेका छन् । उनी अहिले सुपरहिट भैसकेका छन् । सिनेमा रामकहानीको सफलतापछि अभिनेता आकाश श्रेष्ठले ४६ लाखको कार किनेका छन् ।
सिनेमा ‘प्रेम गीत २’ को सफलतापछि प्रदीप खड्काले निर्माता सन्तोष सेनबाट कार उपहार पाएका हुन् । सिनेमा सफल भएपछि उनले प्रदीपलाई सेयरको रुपमा कार उपहार दिएका हुन् । प्रदीपले पाएको हुन्डाइको क्रेटा कारको बजार मूल्य ४२ लाख छ ।
कारमा हिँड्ने अर्का कलाकार हुन् पल शाह । उनले आफ्नै कमाईले कार किने, जुन उनको जीवनको एउटा खुशीको पल थियो । पल शाह निशानको सन्नी कार चढ्छन् । जसको बजार मूल्य लगभग ४० लाख पर्न आउँछ ।